Naqshadeynta loogu talagalay dadka waaweyn iyo carruurta | Soosaarayaasha daabacaadda daabacan ee daabacan | Sameynta iyo daraasadaha
Naqshadeynta loogu talagalay dadka waaweyn
Maite Nicuesa | | Tababar
La naqshadeynta loogu talagalay dadka waaweyn waa farshaxanka qorista iyadoo la raacayo qaab iyo qoraal gacmeed sifiican loo sameeyay. Calligraphy waxay ku hormareen iskuulada, jaaliyadaha iyo dhaqamada. Waxaa jira qaabab kala duwan oo naqshadeynta ah. Khabiir ayaa garanaya dhammaantood, oo ay ku jiraan kuwa naqshadeynta farshaxanka. Warqaddu waa arrin shakhsiyadeed oo shakhsiyadeed oo ku saabsan macluumaadka ku saabsan qof kasta oo bini aadam ah
Calligraphy waxaa lagu bartaa dugsiga laakiin waa in lagu xoojiyaa guriga. Sababtaas awgeed, macallimiinta iyo waalidkaba waa inay lahaadaan aqoonta soo-saarayaasha jaangooyooyin kala duwan.
1 Qalabka dhaliya qoraalada
1.3 Sanduuqa Kheyraadka
2 Sida loo bilaabo qorista qoraalka
3 Sidee loo hagaajiyaa naqshadeynta dadka waaweyn
Qalabka dhaliya qoraalada
Iyada oo la adeegsanayo soo -saareyaasha wicitaanka ee dadka waaweyn iyo carruurta waxaad ku abuuri kartaa layliyo si aad u hagaajisid qoraalka adiga oo beddelaya qaabka ama cabbirka fontka. Sidan, ardayda iyo dadka waayeelka ah ayaa awood u leh inay koobiyeeyaan oo si tartiib tartiib ah u hagaajiyaan farsamada. Sidoo kale, mahadsanid naqshadeynta daabacan, waad iska ilaalin kartaa iibsiga buug yare ku takhasusay naqshadeynta dadka waaweyn. Agabkan waxaad ku abuuri kartaa go'yaal iyo go'yaal qoraal shaqsiyeed leh.
Laakiin ilahaani maahan inay ahaato kaliya ardayda da'da iskuulka ama Waxbarashada Aasaasiga ah. Haddii aad qaan-gaar tahay, oo aadan jeclayn qoraalkaaga, waxaad ogaan kartaa waxyaabaha soo socda matoorrada naqshadeynta. Xusuusnow farriinta: "Waxaad ku baranaysaa oo keliya qorista qorista."
Marka xigta, waxaan soo bandhigi doonnaa qaar ka mid ah koronto-dhaliyeyaasha wax lagu qoro ee loogu talagalay dadka waaweyn iyo carruurta aad isticmaali karto.
Qalabyada barashada qorista
Boggan pekigis.com waxaad ka heli kartaa degel aad kaga soo dejisan karto bilaash laylisyada wicitaanka qoraalka xuruufta waaweyn iyo kuwa yaryarba. Qofkasta oo raba barashada qorista ama hagaajinta qoraalkaaga gacanta, waxaad fursad u leedahay inaad ku gaarto hadafyadan. Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale heli kartaa ciyaaro, bogagga midabaynta, sheekooyinka, tijaabooyinka iyo ilaha kala duwan ee kala duwan.
Shabakadda loo yaqaan mclibre kuu oggolaanayaa inaad abuurto kaararka calligraphy -ka ee dadka waaweyn, laakiin sidoo kale si loo wanaajiyo garaafyada carruurta. Kaliya waa inaad buuxisaa foom fudud oo aad ku abuureyso kuna daabacayso waxqabadyada qoraalada ee pdf. Xulo inta udhaxeysa noocyada xarfaha (qumman ama dhibic) iyo khadadka aad rabto bog kasta. Shaki la'aan, tani waa ilo aad u xiiso badan.
En sanduuqa kheyraadka sidoo kale waxaad ka heli kartaa wax weyn matoor tilmaame daabacan oo daabacan. Ka dooro dhawr ikhtiyaar: dhibic, shabakad, cabbirka font iyo xitaa jihaynta bogga.
Maxaad u maleyneysaa ilahaan si loogu fuliyo laylisyada qoraaleedka loogu talagalay dadka waaweyn ama carruurta? Waad ku abuuri kartaa kaararkaaga hadba baahidaada ama ta ardaydaada. Midkee ka mid ah ilahaas oo dhan ayaad ugu jeceshahay?
Sida loo bilaabo qorista qoraalka
Sidee farta gacanta loogu qurxiyaa? Calligraphy wuxuu ku darayaa taabashada farshaxanka qoraalka, maadaama ay daryeesho bilicsanaanta ereyada. Xullo meel raaxo leh oo iftiin fiican leh si aad wax ugu qorto. Waa muhiim marka aad bilowdo inaad sameyso xariijin inaadan ka dareemaynin nooc hoos ah oo ku yaal xaashida. Taasi waa, diyaarso goobta shaqada.
Si aad si fiican ugu qorto iyada oo loo marayo quruxda istaroogga, adoo daryeelaya dhaqdhaqaaqa warqad kasta, waa muhiim inaad si buuxda diirada u saarto hadafkan. Waxaa jira noocyo kala duwan oo waraaqo ah oo loo isticmaali karo hawshan. Waa inaad doorataa warqad ku habboon si aad u bilowdo laylis. Qaabka nuugista suurtagal ma'aha in lagu sameeyo sixitaanno ku xiga. Waraaq leh qaab jilicsan iyo dusha sare ayaa si gaar ah ugu habboon. Qaabka noocan oo kale ah wuxuu ka dhigayaa habka qoraalka mid sahlan.
Xullo qalimmo, calaamado ama qalimmo kala duwan si aad u tijaabiso. Hase yeeshe, waxaa jira maacuun qoraal oo si gaar ah ugu habboon bilowga: qalinka. Iyada oo gacan laga helayo qalabkan waxaad ku siin kartaa qaabka aad rabto warqad, adoo ku daraya xariiqyada toosan iyo qalooca. Caarada qalinku waa inay noqotaa qaabka aad rabto inaad si sax ah u samayso khadadka ugu khafiifsan ama ugu dhumuc weyn. Qoraalka hal-abuurka ah ee sheeko, qoraagu wuxuu raadsan karaa ilo kala duwan oo dhiirrigelin ah.
Hagaag, dhiirigelinta sidoo kale waa mid aad u joogta naqshadeynta. Maadaama aad ka heli karto tixraacyo fara badan oo kugu hagaya layligan. Waxyi waa tusaale aad ku dayan karto. Laakiin xusuusnow inaad uga tagto sumaddaada habka aad wax u qorto. Calligraphy marwalba waa la horumarin karaa. Xaaladdaas oo kale, isku day inaad sheegto ujeeddada aad jeclaan lahayd inaad ku gaarto barashadan. Dhinac noocee ah ayaad rabtaa inaad ku dhammaystirto qoraalkaaga? Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inuu noqdo mid cad oo la aqrin karo.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka isticmaalka qalinka layligan ayaa ah inay suurtagal tahay in qalad la saxo markaad isticmaaleyso cinjirka. Si kastaba ha noqotee, way ku habboon tahay in lagu hormariyo nidaamkan hal-abuurka ah iyada oo aan la raadin natiijo kaamil ah daqiiqadda ugu horreysa. Waa waayo-aragnimo ku siinaysa farsamada iyo barashada lagama maarmaanka u ah himiladaas. Sidan oo kale, haddii aad keydiso layliyada aad sameysay waqti ka dib, waxaad awoodi doontaa inaad u fiirsato horumarkaaga.
Nidaamkan barasho marwalba waa tartiib tartiib. Sidaas darteed, Kahor intaadan qorin ereyada ugu horreeya, waxaa lagugula talinayaa inaad sameyso noocyo istaroog ah oo kala duwan. Isdeji oo ku raaxee qorshahan waxqabad. Faaligani waa waxa aad u isticmaali doontid qorista xarfaha iyo ereyada. Sidaa darteed, wejigan hordhaca ah wuxuu kuu diyaarinayaa inaad u dhaqaaqdo jihada yoolka ugu dambeeya. Qaabka loo adeegsaday qoraalka waa in lagu ilaaliyaa inta lagu jiro. Aad ha ugu cadaadin qalinka, maxaa yeelay taasi waxay kaa dhigeysaa mid daal badan. Khaladkan ayaa u baahan dadaal dheeri ah. Isku day inaad la socoto nidaamka qoraalka.
Sidee loo hagaajiyaa naqshadeynta dadka waaweyn
Sidee loogu fuliyaa waxbarashadan marxaladda dadka waaweyn? Barashadan, sida kuwa kale, had iyo jeer waa shakhsi. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad dhammaystirto qoritaanka shaqal ama shibbane taasi, sababo gaar ah awgood, waxay umuuqdaan kuwo aad u adag. Akhriso qoraallo kala duwan oo aad horey uqortay. Qaabkan, waxaad ku qeexi kartaa macluumaadkan si aad diiradda u saarto barashadaada hal jiho. Ka taxaddar kala sooca xarfaha, maxaa yeelay mid waliba waa inuu leeyahay boos u gaar ah. Dhanka kale, ereyada waa inay muujiyaan isku mid ahaanta heerka muuqaalka. Is-waafajinta iyo saamiga ayaa muhiim u ah naqshadeynta.
Maalmahan, dad waaweyn oo badani wax badan ayey ku qoraan kumbuyuutarka, maadaama tani ay tahay wax caado ku ah xirfadda. Laakiin way ku habboon tahay in laga soo kabto farshaxanka far-qoraalka. Baro nafsad ahaantaan nolol maalmeedkaaga. Tusaale ahaan, qor joornaal, isticmaal xusuus-qor warqad ah, xusuus qor markaad ka qayb gasho shirka, wax ku qor sabuurad, ama warqado u dir asxaabtaada iyo qoyskaaga. Waxyaabaha xafiisyada xafiisyada, sidaas darteed, aad ayey muhiim ugu yihiin miiskaaga.
Sidee loo dhiirrigeliyaa naftaada inta lagu gudajiro barashada naqshadeynta? Ku dhiirrigeliso weedho macno shucuur kuu leh adiga. Tusaale ahaan, qor cinwaanka sheeko aad jeceshahay ama filim aad jeceshahay. Sidan oo kale, diiradda kama tihid kaliya qorista lafteeda laakiin sidoo kale waxaad diiradda saareysaa macluumaadka ay muujinayaan. Layligan ku xidho danahaaga gaarka ah. Haddii aad jeceshahay inaad safarto, mowduucan ayaa kugu dhiirrigelin kara inaad si joogto ah wax u qorto.
Ka taxaddar muuqaalkaaga markaad wax qoraysid laakiin xaashida, sidoo kale, dhig booska saxda ah. Tani waa inay toosnaataa. Isticmaal warqad tayo sare leh si aad u ilaaliso laylisyada gaarka u ah sababo jira awgood.
Waxaa jira ilo gargaar oo kaladuwan oo kugula socon kara adiga nidaamka waxbarashadan. Buugga Calligraphy iyo Waraaqaha Qurxoon: Calligraphy iyo buugga xarafka ee in ka badan toban qaabab casri ah waa hawl ay iska leedahay Laluna Lana. Bogagga buug-yarahaan waxay muujinayaan fureyaasha barashada naqshadeynta casriga ah qaab wax ku ool ah. Daabacaaddani waxay si gaar ah ugu habboon tahay kuwa bilowga ah.
Raadi meel maalinle ah oo aad ku tababarto xuruufta. Uma baahnid inaad waqti badan ku bixiso maalin kasta himiladan. Samee layligan dhowr daqiiqadood oo joogto ugu noqo mashruucan muddada dheer ah.
Waxaan rajeyneynaa in macluumaadkan uu adiga waxtar kuu leeyahay oo uu ku caawin doono hagaaji qoraalkaaga gacanta si aad ugu hesho qoraal gacmeed aad uga qurux badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Sameynta iyo daraasadaha » Noticias » Tababar » Naqshadeynta loogu talagalay dadka waaweyn
Waxaan ahay 45 sano jir waxaanan doonayay inaan ogaado hadii ay suurtagal tahay in la hagaajiyo qoraalka
Ku jawaab libby martinez
Qoraal gacmeedkeygu had iyo jeer wuxuu ahaa masiibo hadana hada tikniyoolajiyad ahaan xitaa si dhib yar xitaa kuma qoro gacmahayga sida ugu fiican ee aan awoodo maxaa yeelay waa wax laga walwalo maxaa yeelay cidna ma fahmin
Ku jawaab maryan
Buugga 'BPF Callic Calligraphy Buugga' wuxuu dammaanad ka qaadayaa barashada qorista far wanaagsan iyo higgaadinta Bogotá DC Eeg tusaalooyinka ka hor iyo ka dib facebook
Jawaab ku saabsan Beatriz Eugenia Prada
Si loo helo habka u dammaanad qaadaya carruurta iyo dadka waaweyn inay wax ku qoraan far wanaagsan: ku calaamadee internetka: BPF Calligraphy Beatriz Eugenia Prada halkaasna waxaad ka heli doontaa waxyaabo cajiib ah.
Ku jawaab bEATRIZ eUGENIA pRA
Waa inaad iska hubisaa qaladaadka higgaadinta, fadlan. Ku dhowaad bilowga waxay dhahaan: »Cilmiga qorista ayaa ku hormarey iskuulada…»
Ka jawaab Luz
5 faa iidooyinka wax aqriska xiliga qaangaarnimada
Waa maxay Baahiyaha Waxbarashada Gaarka ah